DAAWO: Ha Igu Soo Deg Degin! Lionel Messi Oo Ceebeeyay Antoine Griezmann Iyo Felipe Luis Iyo Twitterka Oo Looga Maadsaday Ciyaartoyda Atletico Madrid. - GOOL24.NET
DAAWO: Ha Igu Soo Deg Degin! Lionel Messi Oo Ceebeeyay Antoine Griezmann Iyo Felipe Luis Iyo Twitterka Oo Looga Maadsaday Ciyaartoyda Atletico Madrid.
Lionel Messi ayaa loo doortay xidigii ugu fiicnaa kulankii Barcelona iyo Atletico Madrid kadib markii uu bandhig fiican iyo farsamooyin layaableh ka sameeyay inkasta oo aanu gool dhalintii looga bartay ee kulankan samayn balse waxa uu ahaa xidigii Dembele siiyay fursadii goolka hortiisa ee uu goolka barbaraha ku dhaliyay.
Laakiin waxyaabaha ugu hadal haynta badan ee kulankii Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ah farsamooyin uu Lionel Messi ku bahdilay ciyaartoyda kala ah Antoine Griezmann iyo Felipe Luis isaga oo waliba xidiga reer Brazil ee Felipe Luis ku sameeyay farsamo barta twitterka si wayn loogaga maadsaday.
Lionel Messi ayaa kubbad sare helay isaga oo cadaadis badan kala kulmayay ciyaartoyda Atltico Madrid laakiin isaga oo saddex ciyaartoy oo Atletico Madrid ah ku dhex jira ayuu si aan la rumasan karin kubbada u maamulay wuxuuna kala sii dhex baxay lugaha Felipe Luis.
Laakiin arinta kale ee layaabka leh ayaa ah in Lionel Messi uu sii kala jeediyay xidiga koobka aduunka ku guulaystay ee Antoine Griezmann iyada oo sida aad sawrka sawir ka arki karto uu Messi kubabda ka dhex saaray lugaha Griezmann balse dhinaca uu Griezann wali u sii jeedo ayaa ah mid loogu maadsaday baraha bulshada.
Griezmann ayaa ka hor kulankan waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay qaabkii uu u diiday Barcelona iyo in Lionel Messi uu sababtiisa awgeed uga joogsaday Camp Nou maadaama oo aanu doonayn in uu kaalinta labaad ugu jiro balse isla garoonkii kooxdiisa ayuu Messi ku bahdilay.
Griezmann oo shaqo aad u fiican ka qabtay kulankii Barcelona ayaa marar badan joojiyay Lionel Messi waxaana la arkayay isaga oo si fiican kubbada u soo difaacanayay laakiin ugu danbayn waxa uu ku dhacay dabinkii Lionel Messi waxaana garoonka loogay Griezmann oo jaho qaldan u sii jeeda.
Jamaahiirta kubbada cagta ayaa ku maadsaday Felipe Luis iyo Griezmann iyada oo xataa qaar ka mid ah saxaafadu ay is waydiiyeen dhinaca uu Griezmann u sii jeedo xili uu Messi kubbada dhaafiyay lugihiisa dhexdiisa.
Halkan ka daawo wixii uu Lionel Messi ku sameeyay difaaca Atletico Madrid ee Felipe Luis
Messi with a new type of ball control + nutmeg. 👑🐐 pic.twitter.com/IGubvT8JJW
— khawla (@COUTNIHO) November 24, 2018
Lionel Messi ayaa isku darsaday kubbad maamulid cajiib ah waqti uu cadaadis xoogan dareemayay oo saddex xidig baacsanayeen, laakiin qaabka uu kubbada uga dhex saaray lugaha Luis ee uu markiiba uga dhex baxay ayaa xaalada sii xamaasadaysay.
Fariimo badan, muuqaalo iyo sawiro ayaa loogu maadsaday Felipe Luis iyada oo sidoo kale ay jamaahiirta kubbada cagtu tilmaameen in Messi uu ku guulaystay biladiisii koobka aduunka kadib markii uu kala jeediyay Griezmann.
Laakiin sidoo kale Messi ayaa qaab cajiib ah uga dhex baxay Koke oo xataa qalad ku joojinayay balse Lionel Messi muu ahayn xidiga kaliya ee farsamooyin wayn muujiyay balse Sergio Busquets ayaa Diego Costa si wayn ugu samaystay kaas oo aad muuqaalkiisa halkan ka daawan karto.
Sergio Busquets in his 500th game! pic.twitter.com/aFovJOR7li
— N🎗️ (@Messi_Nutmegs) November 24, 2018
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona iyo Atletco Madrid ayaa barbaro ku heshiiyay iyada oo Simeone uu qarka u saarnaa in uu gaadho guushiisii abid ugu horaysay ee La Liga ee uu Barcelona ka gadhi lahaa laakiin Dembele ayaa goolka barbaraha kaga beeniyay daqiiqadii 90 aad ee dhamaadkii ciyaarta.